Mianjera eo am-pandriana: izay mandavaka ao an-jaridaina afa-tsy môle (famaritana sy sary) - Famokarana voankazo - 2019
Famaritana sy sarin'ireo mpamorona ny lavaka ao amin'ny zaridaina
Rehefa tonga ny fahavaratra dia maro ireo zaridaina sy zaridaina no miatrika ny olana amin'ny bibikely. Nihetsiketsika ny sakafony, nihinana na nanimba ny vokatra sy ny toetran'ny tarehy maro.
Indraindray dia tsy mora ny mamaritra hoe iza no mihady lavaka ao an-jaridaina, satria tsy toy ny mololo amin'ny mololo foana izany. Ary tsy manosika ireo zavamaniry ireo ny môle ary tsy manaparitaka ny fakany, satria tiany ny mihinana bibikely.
Amin'ity lahatsoratra ity dia ho takatsika izay voka-dratsiny afaka mikaroka amin'ny dacha sy ny fomba hiatrehana azy ireo.
Kravchik (voangory snow)
Amin'ny endriny maro, dia toy ny mololo izy io, na dia lehibe aza ny habeny, nefa dia mamela soritsoritsoritra izany ao anatiny. Ny fahasamihafana lehibe dia hoe ny jamba dia mpanani-bohitra, ary ny ady aminy dia mety hampijaly sy haharitra.
Ny jiro mitentina matetika dia tsy mihoatra ny 32 cm ny lavany. Manana tongotra fohy izy ireo, volo fotsy. Ny rambony dia tsy hita, satria kely loatra, dia mihena sy miafina eo ambany hoditra ny masony.
Ny ampahany betsaka amin'ny vatan'ny rato mol dia ny loha. Raha mijery ilay biby avy any ambony ianao, dia mitovy amin'ny lapoaly izany. Ny lavan'ny vavonin'ny molia dia lava sy lava.
Ny fankahalàna toy izany dia tena tia karazan-kazo sy karoty, mijaly amin'ny tongolo lay sy ny ronono, tongolobe ary voninkazo manitra. Mety hanimba koa ny zavamaniry hafa, toy ny vary na tsaramaso.
Fantatrao ve? Amin'ny ankapobeny, boribory iray mirefy 13 kilao amin'ny voankazo samihafa.
Matetika ny biby no manosika ireo zavamaniry ho any amin'ny toeram-pitrandrahana azy, manala ny tampony ary mamela ny faritra ambany ho toy ny tahiry ho an'ny ririnina.
Ny ady amin'ny raty môtô noho ny fomba fiainany ambany dia tsy mahomby, fa mbola azo atao izany. Tsarovy fa misy rat kely goavam-be ao amin'ny boky Mena.
Amin'ny ankapobeny, rehefa miala sasatra ny zaridaina iray manontolo, ny mponin'ny lohataona dia tsy mitahy loatra hoe iza no nanao izany, mba handripahana ny bibikely. Ny molekely goavambe goavambe dia nozaraina tamin'ny ankapobeny tany amin'ny fasika sandika sy tanimanga teo akaikin'ny vatana.
Azo jerena ao Caucasus, any Dagestan, akaikin'ny reniranon'i Terek, Sulak sy Kuma. Mety ho toy izany koa ny biby tsy fahita firy eto amin'ny tranokalanao.
Ianaro ny fomba hanesorana ireo bibilava sy bibilava amin'ny trano fatoriany.
Noho izany, tsara kokoa ny miezaka mamaritra mialoha raha manana rato mahazatra ianao na tsia. Mazava ho azy, tsara kokoa ny manintona na mampatahotra ny rato goavana goavana.
Rantsana molekely Open book 01.svg Anarana iombonana mink tana voalavo Misy fomba maro ahafahana miala amin'ilay bibikely.
Fomba voalohany - fametrahana fandrika. Io fomba io dia tsy mahomby, satria ny jamba dia mahay mandanjalanja. Ny tsara indrindra dia ny miteraka. Rehefa mifampiresaka amin'ny molia ianao dia mety ho hafiriana.
Ny biby dia tsy tia faritra malalaka sy rivotra, ka azonao atao ny mandavaka ny lavany ary manangana olon-dehibe hafa ao amin'ny manodidina. Mametraka fandrika ao amin'ny lavaka ary manarona azy amin'ny zavatra iray. Ny fisafidianana safidy roa, ny rato mol, mazava ho azy, dia hisafidy fiarovana bebe kokoa ary mety ho latsaka ao anaty fandrika.
Faharoa faharoa - tondraka ny bozaka. Ny jamba kely dia tena tsy afaka manohitra ny rano. Fa raha ny tany eo amin'ny fasikao ary dia mandray tsara ny fahamendrehana, dia azo inoana fa ity fomba fitsaboana ity dia tsy miasa ho anao.
Zava-dehibe izany! Ho an'ny fanaraha-maso enta-mavesatra, afaka miantso fotsiny ny manam-pahaizana manokana ianao. Mazava ho azy fa afaka mandany vola be izany, ary ny vokatra farany dia miankina amin'ny fepetra sy ny fahatsoran'ny tenany manokana.
Fahatelo - Mampiasà poizina sy zavatra simika. Mety tsy mety anefa izany. Raha misy sakafo ampy ho an'ny rato molia ao amin'ny tranokalanao dia tsy hijery ny sisin'ny poizina izy. Fomba efatra ary ny iray amin'ireo mahomby indrindra dia ny tabataba sy ny ultrasound. Ny blunts dia mankahala feo. Noho izany, ny fametrahana ny fandrenesana feo dia tsy ho voatery. Ny iray amin'ireo fomba mahomby indrindra dia ny famerenan-kira vibration.
Ny biby dia mitovitovy amin'ny toera-ponenana, nefa misy fahasamihafana roa samihafa - ny lavaka lava kokoa sy ny lamosina efa ela. Ny endriny dia tonga amin'ny endrika roa: ny kirarony sy ny kirihitra.
Ny haingo dia mahatratra haavony tsy mihoatra ny 7 santimetatra ary misy loko maitso, fa matetika ny kiraroka volon-davenona mipoitra no hita ao an-jaridaina ary tsy mihoatra ny 5 santimetatra ny lavany.
fotsy-toothed shrew shrew Aza adinoina ny endriky ny biby, satria ny fomba fijery ny hatsikana dia milay ao anaty sary dia tsy midika fa ny fahasimbana avy amin'izany dia ho kely. Ao anatin'ny roa andro monja dia azo atao ny mihady ny tontonana rehetra, ary ny gilasy dia hikorontana amin'ny korontana.
Ny fikorotanana dia manana metabolismy avo lenta, noho izany dia mitady hatrany ny sakafo izy, vokatr'izany no ahazoana ny hatsiaka toy ny ao amin'ny sarin'ny lavany.
Ny zazakely dia mamahana bibikely, ary mety ho tena ilaina raha ny fahasimbana aterany dia tsy dia tsara loatra. Mandritra ny andro, dia manimba vahindanitra imbetsaka ny vatana amin'ny vatany.
Manampy ny tany mba hihinana oksizenina ny voka-dratsiny. Saingy ny zava-misy dia matetika dia tsy misy zavatra azo tsapain-tanana any amin'ny tany toy izany - vovoka matevina eo amin'ny fakany sy ny zavamaniry izay mijoro eny an-dalana.
Zava-dehibe izany! Ny kofehy dia manome 4 litatra isaky ny fizaran-taona, ka raha tsy miady izany ianao, dia mety hiteraka fihodinana mahatsiravina izany.
Ireo mpanefy minky dia matetika, tena kely. Noho izany, azo inoana fa, voalohany aloha dia ho hitanao ilay kofehy. Aorian'izany dia tokony hikaroka ny akaniny ianao.
Ny fomba voalohany hiatrehana ny fikorontanana - poizina sy zavatra simika. Ny vokatra toy ny "Anti-Rodent" dia ampiasaina amin'ny biby. Zava-dehibe ny mahatsiaro fa ny poizina dia mety hampidi-doza ho an'ny biby fiompy na zanaka, koa mitandrema ary vakio ny torolàlana ampiasaina.
Faharoa faharoa - tondra-drano ireo tsimoka. Tsara kokoa ny manondraka ny lavaka izay miteraka ahiahy.
Fahatelo - Mampiasà zavatra miaraka amin'ny fofona manitra sy tsy mahafinaritra. Ny orona dia manana orona marefo, izany no mahatonga azy ireo tsy mandefitra zavatra matsiro. Manaova trondro mena na atody ao anaty milina. Tsy hilefitra amin'ny fofona toy izany ny kibay ary hamela ny mink.
Tsy mahomby ny fampiasana fandrika amin'ny tsimokaretina. Eny, ary ny iray amin'ireto fomba ireto dia tsy manome antoka 100 hitrandrahana. Afaka manatona mora foana ny solosaina, ka tokony hitandrina tsara ianao.
Mitovy amin'ny totozy mahazatra. Ny halavan'ny vatany dia tsy mihoatra ny 13 santimetatra. Ny volony dia mavo, ary ny volony dia maitso. Tsy toy ny kirihitr'ala, ny vokatra iray dia hihinana ny fotoam-pijinjana marina.
Tiany ny fakany, ny lelany, ny raviny ary indraindray ny voa avy amin'ny zavamaniry sasany (ohatra, tsaramaso). Mihamaro kokoa noho ny kirihitra iray - ny totozy saha dia afaka mamerina ireo taranaka mandritra ny fotoana maharitra hatramin'ny avo 7, 5, indraindray 12 zazakely tsirairay.
Amin'ny ririnina, ny fiaramanidina dia miaro ny lolo milevina, noho izany dia tsy ho tafavoaka velona fotsiny ireo bibikely tsy misy orana. Amin'ny ririnina dia mety hanimba kirihitra sy zaridaina maitso izy ireo.
Ity ambany ity ny sarin'ny tavoahangin-tsolika mink. Mipetraka ao anaty vondrona matetika ny bibikely, mandady hantsana, sarotra. Saingy mitroka lalina - 15 hatramin'ny 35 cm. Ny fisorohana ny fisehoana eo amin'ny teti-dratsy dia fihenanam-bidy tsy tapaka ary ny fijinjana ara-potoana. Saingy indrisy, na ny fitandremana ny fepetra rehetra dia tsy manome antoka fa tsy hanomboka ny volanao.
Inona àry no tokony hatao raha efa vita ny totozy saha eo amin'ny tranokalanao?
Zava-dehibe izany! Amin'ny ankapobeny, ny tena fomba fiasan'ny hetsi-pitenenana amin'ny dacha dia mitovy amin'ny hozatra, ho an'ny volo, ary ho an'ny rat.
Fomba voalohany - Manàna saka tsara, fa tsy kamo. Mazava ho azy, raha maka kotie ianao, dia tsy handeha haingana ny fomba, fa ity fomba ity dia mety mampitahotra ny voles mandritra ny fotoana maharitra ary miaro ny teti-dratsy.
Tsy ny vahaolana azo tsapain-tanana indrindra no ampiasaina amin'ny fandrika, satria mahomby izy ireo raha misy vongo vitsy monja, ary ny isan'ny vols dia mihamitombo haingana.
Faharoa faharoa - poizina baomba sy akora misy poizina. Ohatra, azonao atao ny manamboatra gypsum maina sy lafarinina na sakafo hafa. Ny fitiavana dia misotro toaka aorian'ny sakafo, ary mitoetra ao amin'ny akorandriaka ao an-kibo dia hitarika fahafatesana tampoka. Azonao atao ny manondraka ny bozaka, manala azy amin'ny gaza poizina, na mampiasa ny poizina asa henjana, aorian'izay dia ho faty ny biby.
Ny halatra dia mavesa-danja, ka raha misafidy poizina ianao, dia tsara kokoa ny misafidy izay tokony hihinanan'ny mpanefy indray, fa tsy ny vokatra mitambatra. Fomba fahatelo - fofona sy ratra. Maro ny fitaovana an-tariby azo ampiasaina. Ny volon'ondry ihany koa dia tsy mandefitra ny fofom-borona sy ny alokaloka, tsy tian'izy ireo ny fofon'ny menaka iankinan'ny aina. Noho izany, azonao atao ny mametraka ny raviny ho an'ny vozony, bevohoka, na tongolo lay na lamba vita amin'ny menaka tsy ilaina, na, ohatra, kerosene.
Fomba efatra - Vahaolana amin'ny ammonium nitrate, 3%. Tokony hatsofoka ao anaty lavaka izy io (kaopy 1 eo ho eo) ary voapetaka ambony. Ammonia dia manimba ny vols.
Ny solontenan'ny famokarana fianakaviana Manurers. Eo ihany ny fahasamihafana eo amin'ny havany satria mihinana sakafo mahavelona izy io. Ny voangory tanimanga dia nomem-boninahitra noho ny valanoranony matanjaka, izany dia manosika ara-bakiteny avy any an-kibon'ny zavamaniry.
Voangitra mainty ny volony, hatramin'ny 2,5 santimetatra. Ny lohany dia lehibe sy azo tsapain-tanana, izay antsoin'izy ireo koa hoe Kravchik-golovich.
Kravchiki mihady lavaka lalina, be pitsiny ary lehibe. Izany dia mitranga amin'ny fiandohan'ny lohataona, mandritra ny vanim-potoanan'ny fanambadiana. Avy eo ilay vehivavy dia manomboka ny fanorenana ilay rambony. Mirefy 70 santimetatra ny halan-tongotra, tsy mbola tapaka.
Fantatrao ve? Kravchiki - tena architects. Misy ny fandehanan-drivotra ao anaty lavaka.
Avy eo dia mametraka atody iray ao amin'ny sela voaomana manokana ilay vehivavy ary mandroso mankany amin'ny lampihazo, izay tena mampidi-doza ho an'ny fijinjana manaraka. Kravchiki dia nanangona zavamaniry, nanapaka bozaka sy tifitra.
Avy amin'ny maitso sy ny tsiriny, dia mameno ny isan'ny cubes izy ireo mba hamenoana ilay lavaka. Ity volkano ity dia hihinana ny lavenon'ny voangory. Amin'ny herintaona, hitombo ny isan'ireo Kravchik, ary haverina indray ny tsingerina rehetra.
Kravchiki manimba ny varimbazaha, ny voninkazodia, ary, mazava ho azy, ny voaloboka. Ireo voangory ireo dia mikarakara sakafo betsaka ho an'ny zanany ka afaka manapaka ara-bakiteny ny tifitra rehetra.
Fantatrao ve? Kravchik iray monja iray monja no afaka mamotika 10 loko voaloboka.
Mba hisorohana ny olona miaina eto an-tany, dia tsy mahomby ny zavatra simika. Ho an'ny fepetra fisorohana, azonao atao ny manoro fanazavana lavalava sy lalina (60-70 sm) amin'ilay tranokala. Io halaliny io dia tokony ho ampy ho an'ny tebiteby mba hikoriana amin'ny ririnina. Ny fomba tena ahafahana manala ny voangoloka dia ny fanangonam-bokatra.
Afaka mamotika ny tany ianao, mameno ny fidirana amin'ireo lavaka, afaka mandavaka manodidina ny faritra manodidina ny vakim-paritra, mametraka ny ahitra dia mamorona ny ahitra voatsabo amin'ny akora manokana - pyretroids, fa amin'ny lafiny rehetra dia tsy maintsy manangona bibikely ianao ary mijery azy ireo miseho.
Fomba hafa mahomby - ny menaka legioma mamim-bary sy mora vidy, miara-misakafo amin'ny rano, mandatsaka ao anaty lavaka, ary aorian'ny kravchiki mitsambikina, manangòna ​​ary manimba azy ireo.
Ratsy be ny voalavo. Ary koa, tahaka ny mpihaza rehetra, mampidi-doza satria mitondra ny aretina maro izy ireo. Ao amin'ny trano fatoriana matetika dia mahita rato mena ianao. Antsoin'ny olona hoe Pasyuk izany.
Tena lehibe izy io, mety hahatratra 27 santimetatra ny halavany. Pasyuk dia tsy manan-kialofana, milomano tsara. Izy no nandavaka lavaka teny amin'ny zaridaina, fa tsy ny tena lalina, fa ny sampana.
Ratsy dia marefo - ao anatin'ny herintaona dia afaka miteraka zana-boay 3 hatramin'ny 10 isaky ny tanora. Io bibikely lehibe io dia hiady amin'ny fahavalo lehibe raha tsy misy toerana tokony handosirana. Afaka miady amin'ny olona mihitsy aza i Pasyuk.
Zava-dehibe izany! Mitandrema - ny pasyuk mahery vaika dia afaka mitsambikina amin'ny haavo 2 m.
Ho an'ny fiankinan-doha medvedki dia antsoina koa antsoina hoe lasopy siramamy.
Ny akanim-borona dia matevina - 10-15 santimetatra monja avy eo. Ao amin'izy ireo, ny vehivavy dia mikarakara ny taranany. Ny sampana dia manana sampana sy famoahana maro.
Ny vavy dia mametraka ny fepetra ao anatiny ho an'ny fampiroboroboana tsara indrindra amin'ny lavanila - manokatra sy manidy ny fidirana, mamoaka ny fakan'ny zavamaniry ka manjary tsara kokoa ny akany. Noho izany, ny rafitry ny fotodrafitrasa dia voakasika tsara ihany koa, izay mitarika ho amin'ny fahafatesany.
Ny Medvedka dia afaka ririnina amin'ny tany amin'ny halalin'ny 2 m, ary afaka ririnina amin'ny zezika. Matetika izy miaraka amin'ny kompost dia tonga any amin'ny zaridaina.
Ny ady amin'ny Medvedka, ary koa amin'ny bibikely hafa, dia tsy mora. Ny fanesorana ny lasopy totozy dia tokony hanatona amin'ny fomba feno, mifantoka amin'ny endriny sy ny fahazarany. Diniho ny fepetra fisorohana fisorohana sy fisorohana. Fomba voalohany - famotehana sy fambolena. Mila miezaka ny mihady tsy latsaky ny 15 cm ny halaliny. Mila manao ny dingana 3 heny mandritra ny vanim-potoana iray manontolo ianao. Ho hitanao àry ny akaniny sy atody misy bara mivelatra eo amin'ny tany.
Ny tany amin'ny atody dia tsy maintsy esorina amin'ny saha - alefa ao anaty siny na zavatra hafa. Ary raha toa ianao ka tafintohina amin'ny medvedka lehibe, dia ilaina koa ny handrava - tapahina na tapahina.
Faharoa faharoa - manaova diky. Amin'ny lohataona, dia mety hiparitaka manerana ny zaridaina ny vongan-kaompostra - ny bera dia handinika izany ho toerana tsara ho an'ny akany. Manaova fanaraha-maso matetika, ary aorian'ny fikarakarana atody na olon-dehibe - handrava.
Ny Medvedka koa dia te-hividy composte amin'ny ririnina. Amin'ny faran'ny fararano, manokatra lavaka maromaro izay tianao hametrahana diky. Rehefa tonga ny hatsiaka - manimba sy manaparitaka ny dite avy amin'ny lavaka. Ny Medvedka dia tsy manam-potoana hafenina amin'ny tany ary miteraka.
Raha efa nanomboka ny bera, ary hatramin'ny fararano amin'ny fararano dia mety handrava fotsiny ny zaridao, dia azo alaina tahaka izao manaraka izao.
Fomba voalohany - fanadiovana. Ny rano mifangaro amin'ny vovoka na savony, natsipy tao amin'ny takelaka ho an'ny kapustyanka, na mamono na mamoaka azy. Avy eo dia azo ravana izany.
Faharoa faharoa - poizina sy zavatra simika. Ny zava-mahadomelina toy ny Thunder na Medvetoks dia azo harotsaka ao anaty minks, na mifangaro amin'ny varimbazaha varimbazaha ary mihintsana any amin'ny toerana mila fiarovana amin'ny ankapobeny na eo akaikin'ny mink. Azonao ampiasaina ihany koa ny kerosene amin'ny rano. Fahatelo - fandrika. Kapustyanki tia ny tantely sy tantely. Ny siny iray misy labiera kely (hatramin'ny 100 g) dia tokony halevina amin'ny hantsana amin'ny tany, ka mametraka ny tendany eo an-tampony.
Ny akofa dia tsy maintsy tapahina amin'ny gaze. Ny Medvedka dia mamakivaky ny lamba ary midina ao anaty siny, ary tsy ho afaka hivoaka any izy. Rehefa feno ilay siny, dia mora simba ny bibikely.
Raha misy lozam-pifamoivoizana voalaza etsy ambony voalaza ao amin'ny zaridao, dia milazà ady lava ary aoka ho azo antoka aloha ny hamaritana hoe iza no mihady ny tany ao amin'ny tanindrazanao.
Azo inoana fa ny sasany amin'ireo fomba tsy mety aminao, fa azo antoka fa misy iray izay ho salama. Ny vahaolana tsara indrindra dia ny fampiasana tetikady feno mampiasa ny fomba rehetra azo atao.
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Famaritana sy sarin'ireo mpamorona ny lavaka ao amin'ny zaridaina